Visa kune iyo UAE - Tangidza Hupenyu hutsva muDubai kana Abu Dhabi
Google ye MENA inozivisa kubatanidzwa kweArabhu pane maapplication mudunhu uye nezvimwe zvakawanda
Iwe une Emirates!
Tora Visa kuDubai!
Visa kune iyo UAE - Tinoda Dubai !. Tora vhiza uye ushande muAFA. Kazhinji kutaura, kana iwe uri kushamisika iripo nzira yekuwana a vhiza + basa muUAE. Kambani yedu mhinduro kune yako yekutsvaga. pasina kuripa zvekare. Iyo Dubai Kambani inzira yekuwana vhiza yekushanda kana bhizinesi vhiza kana kubatana nevamwe muAFA. Iine account yakagadziridzwa, unogona kuwana mabhizimusi matsva nemikana yebasa mu Middle East.
Tora Visa kune iyo UAE!
Pinda Dubai City Company kambani yekutanga Visa Services. Saka, maneja weakaunti yedu anokupa iwe mukana wakanaka kudzidza zvakawanda nezveMiddle East. Kambani yedu inogadzira mukana wevakuru vekunze kuti vabatsire kuwana vhiza uye vashande kuMiddle East. Ne yedu vhiza system, unogona kuenda kuDubai kana Abu Dhabi uye unobatana neakanakisa mabhizinesi epasi rose emabhizinesi, Uyezve kumusoro uko unogona kushamwaridzana zvakananga nevashandi uye HR maneja zvakanyanya kubva kuQatar, UAE, Kuwait.
Visa uye ushande neDubai City Company?
Isu tiri vanonyanya kuzivikanwa Visa mupi kuMiddle East. Ino ndiyo yako mukana kutora danho rekutanga kune rako Middle East rwendo.! Chikwata chedu chakatarisira kukubatsira kubva ku A kuenda kuZ nechirongwa chako chekutama kuenda kuUnited Arab Emirates. Sezvo iwe ukagara mu Abu Dhabi, Sharjah kana Dubai iwe uchakwanisa kutsvaga Basa. Zvakare, chete kambani yedu inochengetedza visa process yekugara, inobatsira nekutengesa tikiti uye nekupa nzvimbo yekugara kwekutanga kwechiroto chako chitsva cheArabhu. Isu tine tariro yekuti muchave mumwe wevachatanga kubatana muUnited Arab Emirates. Dubai, Abu Dhabi naSharjah ichave imwe yenzvimbo dzako.
Guta reDhailand riri nzvimbo inoshamisa!
Mirayiridzo yevatsvaki veJobho Pasi peMunhare MaPortals eMa Dubai, UAE
Isu tose tinoda UAE
Mazuva ekutanga e30 ndeMahara!
Kutanga neDubai City Kambani nekuda kwe $ 1 / Month chete